လောကနတ်: ၀ိသာခါကို သူ့အဖေဆုံးမတဲ့စကား (၁၀)မျိုး
.... NavBar ဖွင့်/ပိတ်
( ၁ ) အိမ်တွင်းမီး အပြင်မထုတ်ရ( ၂ ) အိမ်ပြင်မီး အတွင်းမသွင်းရ
( ၃ ) ပြန်ပေးမည့်သူကိုသာပေး။ ( ၄ ) ပြန် မပေးမဲ့သူကို မပေးနဲ့။
( ၅ ) ပေးသင့်သူကိုလည်း ပေး။( ၆ ) ချမ်းသာစွာထိုင်။
( ၇ ) ချမ်းသာစွာ စား။( ၈ ) ချမ်းသာစွာ အိပ်။
( ၉ ) မီးကို ရိုသေစွာလုပ်ကျွေး။( ၁၀ ) အိမ်တွင်းနတ်ကို ရှိခိုးပူဇော်။
( ၁ ) အိမ်တွင်း မီး အပြင် မထုတ်ရ ဆိုတာ .. အိမ်တွင်း မှာ ရှိတဲ့ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာ ကိစ္စ အဝဝ ကို အပြင် ဖောက်သည် မချ နဲ့ လို့ ဆိုလို တာပါ။
( ၂ ) အိမ်ပြင် မီး အတွင်း မသွင်းရ ဆိုတာ…ပြင်ပမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာ တွေ ကိုလည် အိမ်တွင်း သည်မလာ နဲ့ လို့ ဆိုလိုတာ ပါ။
( ၃ ) ပြန်ပေးမယ့် သူကို ပေးဆိုတာ.. ချေးငှား တဲ့ အခါ ပြန်တောင်း ရမည့် သူ ကိုသာ ချေးငှား လို့ ဆိုတာပါ။
( ၄ ) ပြန်မပေး မယ့် သူကို မပေးနဲ့ ဆိုတာ… ပစ္စည်း ဥစ္စာ ချေးငှား တဲ့ အခါ ပြန်တောင်းရမ်း လုိ့ မရမည့် သူ ကို မချေးငှား နဲ့လို့ ဆိုလို တာပါ။
( ၅ ) ပေးသင့် သည် ဖြစ်စေ၊ မပေးသင့် သည် ဖြစ်စေ ပေးပါ ဆိုတာက… မိမိဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း ထဲမှာ .. ဘဝပေး အရ မပြည့်စုံတဲ့ သူတွေ ကိုတော့ ဘာမှ မျှော်လင့် တောင့်တ မနေပဲ ထောက်ပံ့ လိုက်ပါ ဟု ဆိုလိုတာပါ။
( ၆ ) ချမ်းသာစွာ ထိုင်ပါ ဆိုတာ.. မိမိ လင်ယောက်ျား၊ ယောက္ခမ တွေရဲ့ အထက် အရပ်၊ လေညာ အရပ် စသော မပြစ် မလွတ် သော နေရာ မှာ မထိုင်ဘဲ အပြစ်ကင်း သော နေရာ မှာ ထိုင်လို့ ပြောတာပါ။
( ၇ ) ချမ်းသာစွာ စားပါ ဆိုတာ… မိဘ၊ ယောက္ခမ၊ ခင်ပွန်း တို့ကို ရှေးဦးစွာ ကျွေးပြီး နောက်မှ စားပါလို့ ပြော တာပါ။
( ၈ ) ချမ်းသာစွာ အိပ်ပါ ဆိုတာ.. မိဘ၊ ယောက္ခမ၊ လင်ယောက်ျားတို့ ကို သင့်တင့် သော ဝေယျာဝစ္စ ပြုပြီးမှာ အိပ်ပါ လို့ ပြောတာပါ။
( ၉ ) မီးကို ရိုသေစွာ လုပ်ကျွေး ဆိုတာ.. ယောက္ခမ တွေ ကို ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက် လို့ ပြောတာပါ။
( ၁၀ ) အိမ်ဦးနတ် ကိုရိုသေ ဆိုတာ.. မိမိ လင်ယောက်ျား ကို အိမ်ဦးနတ် ကဲ့သို ဆက်ဆံ ရမယ် လို့ ဆိုလို တာပါ။
Posted by zaw lai at 11:44 PM
ငါကား လောကထက် အမြတ်ဆုံး အကြီးဆုံး အချီးမွမ်းအပ်ဆုံး ဖြစ်သည်
အိမ်ဦးခန်း၌ မစင်တက်စွန့်သော ခွေးကို အိမ်ရှင်က ရိုက်ရာတွင် အိမ်ရှင်၏ အပြစ်မဟုတ်။ ရိုင်းပျသော ခွေး၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။ ပြစ်မူကျူးလွန်သူကို ထိုက်တန်သည့် ဒဏ်ချရာ၌ တရားစီရင်သူ၏ အပြစ်မဟုတ်၊ ဒုစရိုက်ကောင်၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။ ထိုနည်းတူစွာပင် ဓမ္မကို စော်ကားလာသူကို သုတ်သင်ရာ၌ သုတ်သင်သူ၏ အပြစ်မဟုတ်၊ စော်ကားသူ၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။ ဗုဒ္ဓကို စွပ်စွဲလာ၍ ဒဏ်ခတ်ရာ၌ ဒဏ်ခတ်သူ၏ အပြစ်မဟုတ်၊ စွပ်စွဲသူ၏ အပြစ်သာ ဖြစ်ချေ၏။ ထို့ကြောင့် အရေးမခံချင်၊ အသုတ်သင်မခံချင်၊ ဒဏ်ခတ် မခံချင်လျှင် ဗုဒ္ဓကို မစွပ်စွဲသင့်ကြချေ၊ ဓမ္မကို မစော်ကားသင့်ကျချေ၊ သာသနာကို မဖျက်စီးသင့်ကြချေ၊ ထေရ၀ါဒကို မပုတ်ခတ်သင့်ကြချေ ၀ီရသူ(မစိုးရိမ်)
ယုံကြည်ထိုက်သူဖြစ်အောင် ရိုးသားရမည်။ အားကိုးထိုက်သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမည်။ လေးစားထိုက်သူဖြစ်အောင်စင်ကြယ်ရမည်။ (ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ) --------------------- သူတစ်ဖက်သား မျက်မာန်ပွားသော် တရားမကွာ ထိန်းစောင့်ကာဖြင့် မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်ကသုံးလျှင် အရှုံးဘယ်မှာ ရှိချိမ့်နည်း။ (မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး) --------------------- အတိတ်ကိုတွေး မဆွေးလေနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြန်မလာဘူး။ အနာဂါတ်မှန်းဆ မလွမ်းတနဲ့ အနာဂါတ်ဆိုတာ မသေချာဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ လုပ်သင့်ရာဝယ် ပညာလုံ့လ အသုံးချလျှက် ဘ၀တန်ဖိုး အားမာန်ကိုး၍ မြတ်နိုးကြည်ဖြူ အရယူလော့။ (ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ) ............................... မလွှတ်ကာမ၊ မရသတိ၊ မရှိဆရာ၊ မပါအင်အား၊ မထားလုံ့လ၊ ဤငါးဝ၊ တရားမရကြောင်းတည်း... (က၀ိဗန္ဓနကထာ) .............................. ရာဂပါးမှ တရားမြင်သည်။ ဒေါသပါးမှ သနားကြင်သည်။ မောဟပါးမှ အမှားမြင်သည်။ ထိုသုံးပါး မနားမနေနှင့်... (က၀ိဗန္ဓနကထာ)
တရားတော် ဗွီစီဒီ များ
Buddha Web English
Buddhanet - Buddha Dharma Education Association Inc. GIVE YOUR SUPPORT TO THE VICTIMS IN S.E. ASIA
Abhayagiri Monastery: A Buddhist Monastery in the Tradition of Ajahn Chah, Ajahn Sumedho & Amaravati Buddhist Monastery
ဂန္ဒရုံ ဘုံကျော် ဆရာတော်
မိတ်ဆွေရဲ့ စာလေးတလုံးဟာ ကျွန်ုပ်အတွက် ပီတိပါ...Please you write something
မဟာဗုဒ္ဓ၀င် video အရှည်(နောက်ခံစကားပြေား )
ဓမ္မ ဒါန နတ်ဆိုး www.lawkanet.blogspot.com
htay ra war da yae
ွှThe Life Of Buddha History
လောကနတ်. Awesome Inc. theme. Powered by Blogger.